Ngwa 8 kachasị mma iji mee mkpokọta foto | Gam akporosis
Ngwa iji mee ka mkpokọta foto
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Ngwa gam akporo, Foto, Nkuzi
.Nnɛ anyị bụ 24 awa glued igwefoto. Kwa ụbọchị, anyị nwere ekwentị anyị n’aka. Na ekele ya Anyị na-ewepụta oge kwa ụbọchị nke na-agwa ọtụtụ ihe banyere etu anyị si adị ma ọ bụ otu anyị si ebi ndụ. Ọ bụ eziokwu na anyị na-agbakọta foto buru ibu nke "ehichapụ" nke na-ewe ohere n'ụzọ na-enweghị isi. Mana oge ụfọdụ n'etiti tangle foto ahụ anyị na - achọta njide ndị bara uru.
Kedu ihe anyị na-eme na foto ndị ahụ na-egosi na smartphones anyị na-amasị? Anyị na-egosiworị gị ngwa kachasị mma maka chọọ foto n'efu ma taa, anyị ga-akwado gị nke kacha mma ngwa ike ihe mbụ mejupụtara ma ọ bụ collage. Anyị ga-achọ ụfọdụ foto kachasị amasị gị. Gị gam akporo ama. Na nke ị masịrị gị na ngwa ndị anyị na-agwa gị ugbu a.
Ugboro ole nne gị gwara gị na a ga-ebipụta foto a? Nke a bụ ihe ihere na ha nọrọ na ekwentị. N’ime obi anyị, anyị maara na ndị nne na-ekwu eziokwu, dị ka ọ na-eme. Anyị ga-egosi gị ụfọdụ ngwa nke mere na ị nwere ike ịme foto mara mma na foto gị kacha mma. Ma gịnị kpatara ya, Ọ bụrụ na nsonaazụ gị na-amasị gị iji bipụta ya ma nwee ebe nchekwa iji chọọ ụlọ gị mma, ma ọ bụ mee onyinye mbụ.
Just ga-ekpebi otu n'ime ndị anyị ga - adụ gị ọdụ. Na nnukwu katalọgụ nke ngwa ngwa Google na-enye anyị, enwere ohere maka ọtụtụ ụdị ngwa metụtara foto. Enwere ngwa iji mee montages na-atọ ọchị nke foto ma ọ bụ mepụta "memes" a ma ama. Ngwa maka foto retouching na a ọkachamara imecha, na N'ezie, ngwa ọdịnala na-eme mbụ mejupụtara. Taa, anyị ga-elekwasị anya na collages.
1 Ngwa kacha mma iji mee ka mkpokọta foto
1.1 Foto Editor Editor Collage Onye kere 2020
1.4 Foto Grid Onye kere
1.8 Collage Fuzel
2 Gịnị ka i chere nke anyị nhọrọ nke ngwa na-eme ka foto collage?
Ngwa kacha mma iji mee ka mkpokọta foto
Foto Editor Editor Collage Onye kere 2020
Ọ bụ otu n'ime ndị ọhụrụ gam akporo ngwa maka ịmepụta collages nke pụtara na Google Play. Ọ bụ ya mere na ọ bụ otu n'ime zuru ezu ma melite enwere ike ịchọta ya, yana ọtụtụ ọrụ.
Onye nchịkọta akụkọ Foto Collage Maker nwere ndebiri ndebiri ụdị niile. N'ihi nke a, ọ dị mfe iji ma nwee ike iji mepụta ihe mgbagwoju anya site na ihe onyonyo ruru iri abụọ, ọbụna postkaadị nwere otu foto. Ọzọkwa, dị ka ọ gụnyere dị iche iche osisi na ihe oyiyi tupu e, ọ nwekwara ike-eji zipu collages dị ka ekele ụbọchị ọmụmụ, agbamakwụkwọ, oriri nsọ, baptizim ma ọ bụ ụbọchị ọ bụla ọzọ.
A na - enyekwara nke ikpeazụ site n’inwe ohere maka tinye ederede na emoticons dị ka ndị nke ị na-ahụ n'elu. Kedu ihe ọzọ bara uru maka ịmepụta memes onwe m ịkọrọ ndị enyi.
N'ikpeazụ, ngwa a gụnyere ngwaọrụ maka dezie foto. Ọbụghị naanị na ọ na - enye gị ohere ịmegharị ụfọdụ ntọala dịka nwuo, nke iche na agba, ma na-enye ohere ịgụnye nzacha ma ọ bụ ọbụna image nkọ. N'ụzọ dị otú a ị nwere ike blur ihe dị n'azụ protagonist na foto gị, iji nye ya ọkachamara ọkachamara.
Foto foto: Onye nchịkọta akụkọ foto
Developer: Eserese Eserese
Anyị na-agafe asọmpi nke ngwa mbụ. Ọ bụ ngwa yiri nnọọ gaa na ihe anyị kwurula na mbụ, mana mepụtara site na InShot Inc., kama A Photo Studio. Ihe dị otú ahụ bụ esemokwu n'etiti ụlọ ọrụ abụọ ahụ, na ngwa ha nwere ikike yiri ya na akara ngosi yiri nke ahụ.
Ọ bụrụ n ’iju ihe kpatara anyị jiri kpọọ ha abụọ ma ọ bụrụ na ha enweghị ọtụtụ iche, nke a bụ maka ha ndakọrịta ọnụ. Ọ bụrụ na mmadụ anaghị arụ ọrụ nke ọma na gị smartphone,, ma ọ bụ kwụsị ime ya na mmelite, ị nwere ike ịnwale nke ọzọ iji gaa n'ihu dị ka ọ dị na mbụ.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịtụgharị nke ọma ma chọọ ịhọrọ nke kachasị amasị gị, ndị a bụ ikike nke Photo Collage & Photo Editor: ọ na - enye gị ohere ịmepụta ihe nchịkọta nke ihe onyonyo ruru iri abụọ, nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndebiri, predesigned oyiyi, Marcos editable, emoticons, ohere nke ịgbakwunye ide ozi n'ekwe ntị y dezie foto. Ihe a niile lekwasịrị anya na mbipụta na netwọkụ mmekọrịta dịka Instagram, Facebook, Snapchat...
Nchịkọta foto - Onye nchịkọta akụkọ foto
Developer: Onye na-ese foto & Onye Mmekọ
N'ebe a anyị agbanweela nke atọ, n'ihi na Gandr bụ a dị nnọọ iche collage ngwa. Na ya, ihe ọ bụ maka inwe ike ime mosaics mmehie kwesịrị iche banyere ya oke foto. Ma 18 ma ọ bụ 20 dị ka ndị gara aga. N'ebe a, enwere ike ịgụta ihe oyiyi na narị otu narị, na ngwa ahụ ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ ya n'enweghị nsogbu.
Na nloghachi bụ obere zuru ezu karịa ndị ọzọ n'ụzọ ụfọdụ dị ka dezie foto. Ọ bụ ezie na enwere ike ịkwụ ụgwọ ahụ ma ọ bụrụ na ị jiri nchịkọta akụkọ ihe oyiyi nke ekwentị n'onwe ya ma ọ bụ ngwa ọzọ. Ihe o nwere bu ndebiri iji kesaa foto ahụ n'ụzọ dị iche iche, configurable border, dị iche iche otosịrị iru maka collage (ụfọdụ maka netwọkụ mmekọrịta) na nhọrọ ịgbakwunye ide ozi n'ekwe ntị.
Ọ bụrụ na ịhọrọ pro mbipute, collages na a mkpebi nke ihe karịrị Pikselụ 8.000 x 8.000. Nke na - eme ka ọ bụrụ ngwa bara uru maka ibipụta collages nke ọtụtụ nnukwu foto. Na mgbakwunye, jiri ụdị akwụ ụgwọ a, ewepụrụ mgbasa ozi ma rụọ ọrụ nke ịmepụta collages site na ọba niile. Ọ nwere usoro ikpe iji hụ ma ị nwere mmasị.
Gandr: collage na-enweghị oke
Foto Grid Onye kere
Nke a bụ otu n'ime nke anyị ngwakọta ihe e kere eke ọkacha mmasị maka ọtụtụ ihe. Nke mbụ bụ na ọ na-enye gị ohere ịmepụta kacha mbụ mejupụtara karịa ọtụtụ, n'ihi na a ga-ekekọta akụkụ nkewa n'akụkụ diagonally. Nke ahụ, na mgbakwunye na ndebiri ndị a na-ahụkarị na ngwa ndị a.
Nke abụọ bụ na mgbakwunye na nke ahụkarị emoticons, nwere ihe akwụkwọ mmado Ezubere nke ọma, nke na-enye ezigbo mmetụ na foto. Ọbụna ha na-eme ka omimi nke ihe oyiyi ahụ dịkwuo mma site na ịpị aka ole na ole dị mfe. Karịsịa mgbe ejikọtara ya na ngwa blur. Nke atọ bụ na o nwekwara ndabere clipart. Ọ bara ezigbo uru mgbe oghere efu na-ahapụ mgbe ị na-eji foto ole na ole. N'ikpeazụ, na ide ozi n'ekwe ntị iri puku mkpụrụ edemede izizi na fun inye ọzọ pụrụ iche aka ka collages.
N'ịbụ onye na-emezi ngwa nchịkọta, yabụ ikwu okwu, o nwere oke onyonyo maka ọrụ ọ bụla: ruru foto 20. Otú ọ dị, o nwere ụfọdụ edezi ngwaọrụ dị nnọọ elu, nke na-enye ohere mgbanwe site na nke kachasị mkpa na-agbakwunye ihe ojoo Styledị Instagram, bugharia oyiyi, wdg.
Onye nchịkọta akụkọ foto - FotoEditor
Moldiv bụ otu n'ime ndị editọ foto kachasị ewu ewu na Playlọ Ahịa gam akporo gam akporo. Ihe na-amasị anyị gbasara ngwa a bụ ọrụ dị iche iche dị iche iche ọ na-enye anyị n'otu ngwa. Enwere ọtụtụ ngwa ahịa na ahịa nke na-amachi anyị naanị otu ọrụ, dị ka itinye nzacha, ma ọ bụ ederede, dịka ọmụmaatụ. Na Enwere ekele dị ukwuu na enwere ngwa ndị na-eme ka katalọgụ ụdị ohere dị otu otu ngwa.
Otutu ihe ịga nke ọma nke ngwa a dị na mfe nke ya interface na-eme ka njikwa ya mfe na kensinammuo. N'ihi nke a, a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọrụ na-enweghị gara aga ihe ọmụma nke foto edezi nwere ike ime ka ojiji nke ya na-enweghị nsogbu. Ọbụnadị na-ejitụbeghị usoro mmemme retouching foto ma ọ bụ ngwa rụọ ọrụ na mbụ, ị gaghị enwe nsogbu ịbịaru Moldiv n'oge na-adịghị anya
Otu n'ime akụkụ ndị dị mkpa iji mee ka ọ pụta ìhè, dịka anyị kwurula banyere nke a, bụ imepụta collages na foto gị. Ruo foto itoolu dị iche iche nwere ike jikọta n'otu oge na Moldiv. Naanị anyị ga - ahọrọ n'ime nnukwu okpokolo agba dị iche iche a na-enye iji tinye ihe okike anyị. Ọbụna pAnyị nwere ike icho mma ma jikọta foto anyị na mmasị anyị site na iji nhọrọ «Freestyle»..
Moldiv jikọtara ọtụtụ njirimara anyị na-achọ na Ngwa. Nhọrọ dịgasị iche iche na "nnwere onwe" iji mepụta usoro ọ bụla anyị masịrị ịcheta ncheta anyị.. Ọbụna anyị nwere ike ime mgbanwe na oke oghere ọ bụla ahọpụtara maka foto. Maka nke a na maka ijikọta ngwaọrụ ederede, ihe nzacha, na ọtụtụ mmetụta na otu App, Moldiv kwesịrị ka ọ bụrụ ebe a ma ama na nhọrọ anyị.
MOLDIV - Onye nchịkọta akụkọ foto, mkpokọta
Nke a bụ otu n'ime ngwa ndị ahụ na-ekwekọghị. Ọ bụrụ na ịchọọghị nzacha ahụ anyị na-ahụkarị na ngwa foto, ma ọ bụ mkpokọta ịchọrọ ịme abụghị ka ị tụrụ anya ya, nke a bụ ngwa gị. Ọ bụ ezie na interface ya adịchaghị mgbagwoju anya, ọ nwere ike were anyị ntakịrị oge karịa Moldiv.
Akụkụ ahụ nke ngwa ahụ bụ ihe mmemme dị ka PhotoShop. Ikike iji ọkwa dị iche iche iji dezie foto anyị na ọkwa dị elu nwere ike ịgwụ ike maka ndị na-amaghị ihe. Chekwa ihe mgbochi a, nke maka ọnụ ọgụgụ ka ukwuu ga-abụ ihe na-adịghị adị, Pixlr bụ ngwa ọrụ pụrụ iche.
Ohere nke imepụta ihe ruru nde abụọ nke mmetụta na-eme ka anyị jide anyị enweghi ngwụcha. Site na iji ihe eji ekpuchi foto, yana itinye ihe nzacha, foto anyị ga-abịarukwu nso na ọrụ nka.
Dị ka nke gara aga na ndepụta ahụ, Pixlr pụtara maka omume dịgasị iche iche ọ na-enye anyị. Mee ka nke ahụ pụta ìhè enwere ihe ruru nsụgharị atọ nke akaụntụ njirimara. Nhọrọ maka ịme mkpokọta adịghị ka nke Moldiv, mana ha nwere afọ ojuju. Egosiputa ihe enwere ike ịmepụta mkpokọta na mkpụkọ dị iche nke otu foto iji mepụta mkpokọta ịtụnanyas.
The ohere anyị nwere mgbe ị na wụnye ngwa ọ bụ larịị «Starter«, Nke ọ bụla dara n’akụkụ ihe karịrị narị isii mmetụta dị n’efu. Ọ bụrụ na anyị ekwenye ịdebanye ahana-eke akaụntụ Pixlr nke anyị, nke bụkwa n'efu, profaịlụ anyị gbanwere «dị mkpa». Site na profaịlụ ọrụ a anyị ga-enwe ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke mmetụta na ohere. N'ikpeazụ, ụdị "Pro", maka ego., nke na-enye anyị ohere zuru ezu na njikwa ngwa. Dị nnọọ ịtụle ngwa a, ọbụnadị na ịnweta ohere ọ karịrị ndị ọzọ akwụ ụgwọ.
Pixlr – Onye nchịkọta akụkọ foto
Developer: Lablọ nyocha Inmagine
Ngwa a agaghị emechu gị ihu. Ọ bụrụ na ị bụ omiiko banyere collages na a App ị nwere ike palitere gị creativity. Dị ka mfe dị ka ọ dị iji, ọ ga - enye mmetụ onwe onye ị na - achọ foto kachasị amasị gị. Diptic na -emepụta imepụta ihe egwu ụmụaka. Ọtụtụ ohere ọ na-enye ga-enyere onye ọ bụla aka ịmepụta ihe mara mma na-enweghị mkpa ntuziaka.
Ogwe onye ọrụ bụ ihe kensinammuo na ihe e kere eke na-eme n'onwe ya. Na elu iri isii na otu dị iche iche aghụghọ Diptic na-enye anyị ohere nke ịbụ ihe mbụ na ncheta anyị kachasị mkpa. Dị ka Moldiv, Diptic nwere nhọrọ iji gbanwee oke oghere dị iche iche iji tinye foto.
Mgbe anyi choro ime ka ihe ncheta anyi di nma n’ime uzo mbu, anyi anaghi enwe nhọrọ igbanwe nha oghere ndia. Na oge ụfọdụ ọ na - eme na foto zuru oke anaghị ahụ ebe ya na ngwakọ nwere oke ma ọ bụ akụkụ anaghị adabara gbaa anyị. Diptic na-enye anyị ohere idozi oghere ndị a na foto anyị ka anyị wee ghara ịgbanwe foto anyị na ha.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmepụta ihe na-enweghị oke, nke a bụ ngwa gị. Diptic abụghị ngwa n'efu, mana 0,75 XNUMX nwere ike ịba uru ma ọ bụrụ na ị "anwụ" na-eme ka ihe pụrụ iche collages. Uru ya na ohere ya bụ ezigbo ihe kpatara obere obere ego a. Ohere nke imezigharị usoro emere tupu oge ụfọdụ na-eweta oke iwe mgbe anyị chọrọ "dabara" onyonyo kwesịrị ya.
Developer: Ụlọ ọrụ UpTop Corp.
Ahịa: € 1.09+
Na-aga n'anya a App. Ọ ghaghị ịdị na ndepụta anyị. Anyị ahụworị ụfọdụ ngwa dị mkpa maka edezi foto ma ọ bụ mepụta mkpokọta gị. Ma Fuzel Collage na-agbakọta na ọkwa ọzọ. Ọ bụ ngwa izizi nke juru ya anya.
Dị ka anyị mere na aga ngwa, anyị mata site Fuzel na nnwere onwe dị ukwuu nke onye ọrụ iji mepụta njikọta. Anyị nwere ike ịhọrọ ọtụtụ foto maka mkpokọta dịka anyị chọrọ. Site n'otu foto ruo otu narị. Ihe niile dabara na Fuzel na ihe niile nwere ike gbanwee ka ọ masịrị anyị.
Ma ọ bụrụ na e nwere ihe na-anọchi ndị ọzọ nke Apps kwuru, ọ bụ ya na Fuzel ị nwere ike ịmepụta ihe mbụ animated collage. Site n'itinye obere vidiyo kama itinye foto ihe okike anyi gha enwe ndu nke ha. Ihe omume a bu ihe n’ile iji kerita “oru aka” anyi n’elu igwe okwu.
Ihe si na ihe animated collage bụ ihe di ka GIF ama ama. Mana ọ bụrụ na ihe mejupụtara na nsonaazụ zuru oke dị ka ọtụtụ gifs na-agagharị n'otu oge. Ọ na-adọrọ anya ma na mbụ. Ma ọ bụrụ na videos na-e dere nke ọma, ị pụrụ ọbụna ike dị iche iche animated na-atọ ọchị-style Mpaghara.
Na mgbakwunye n'inye anyị ozi gbasara ndị ọzọ, Fuzel nwekwara ọtụtụ akwụkwọ mmado. Nwere ike icho mma foto dị iche iche na mmetụta. Ọzọ nke ike ya bụ na Fuzel na-emelite mgbe niilena. The imewe otu nke a App arụ ọrụ akọ na uche nke mere na kwa izu anyị nwere ọhụụ ịchọ mma ọhụrụ.
Gịnị ka i chere nke anyị nhọrọ nke ngwa na-eme ka foto collage?
Eziokwu bụ na na ụlọ ahịa Google enwere ọtụtụ ngwa etinye aka na ntinye foto. Ọtụtụ na ọ ga - agwụ agwụ ịme ndepụta dị mma. Anyị chọkwara ilekwasị anya na ngwa nwere foto mejupụtara na collages dị ka nhọrọ dị mkpa n'etiti ọrụ ha.
N'ezie ngwa ndị a niile nwere ihe jikọrọ. Kedu otu ọ ga - adị ma ọ bụghị, Ihe ọ bụla anyị kere eke mgbe anyị kwadebere ga-abụ otu pịapụ site na ịkekọrịta na profaịlụ mgbasa ozi anyị. N'echiche a, ngwa niile nwere ihe jikọrọ ya na foto maara ikike nke netwọkụ mmekọrịta na ịrụ ọrụ iji mepụta ngwaahịa dị iche na ndị ọzọ.
Ebumnuche bụ ịhọrọ nke kachasị mma maka gị, mana ọ bụrụ na ha abụghị nke kachasị mma, anyị nwere mmasị ha nke ukwuu.. O doro anya na dị ka mgbe niile mgbe anyị na-ahọrọ dabere na echiche anyị, ọ na-esiri ya ike mmiri ozuzo na-amasị onye ọ bụla. Ya mere Anyị na-akpọ gị òkù ka ị gwa anyị ndị ọkacha mmasị gị. Nwere ike ịkọrọ anyị ahụmịhe gị site na iji ha. Ma ọ bụ Nwere ike ịgwa anyị ngwa nke ịchọrọ ihe dị mkpa yana nke anyị kwesịrị itinye na nhọrọ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Foto » Ngwa iji mee ka mkpokọta foto
EVEes ga-ebido na August: nke a bụ ụdị ego ya na ntinye aha ya
Cubot P40 bụ onye ọrụ gọọmentị! Zute Quad igwefoto igwefoto (vidiyo)